Toamasina Nampitomboana ny isan’ny mpitandro ny filaminana
Lasa lohalaharana amin’ny fiparitahan’ny tsimok’aretina coronavirus ny ao Toamasina amin’izao raha teto Antananarivo no niandohan’izany.
Antony maro no mahatonga izany toy ny tsy fanajana ireo toromarika omen’ny Fitondram-panjakana hahafahana miaro ny aretina tsy hiparitaka. Anisan’ireny ohatra ny tsy fivoahana ny trano raha tsy tena misy antony goavana, ny fampiasana aron-tava, ny fanajana ilay elanelana 1 metatra, ny fanasan-tanana amin’ny savony matetika….Ankoatra ireo sahirana ara-pivelomana anefa dia betsaka ihany koa ireo minia mikipy ka tsy vonon-kanaja ny fepetra napetraka mihitsy. Mba hahafahana mandrindra izany ary dia nidina any an-toerana ireo mpitarika ny "Etat-major mixte opérationnel national" (EMMO.NAT) izay ahitana ny kaomandin'ny zandarimariam-pirenena, ny tale Jeneralin'ny pôlisim-pirenena, ary ny Jeneraly solontenan'ny Filohan'ny Etamazaoron'ny Tafika malagasy (CEMA), omaly alatsinainy . Handrindra ny ady hatao amin’ny COVID 19 no anton-dian’izy ireo any an-toerana izay miisa 150 ka anisan’ireny ny fanaraha-maso ny fiainan’ny mponina hanampy ireo efa miasa any an-toerana. Nanamafy araka izany ny Jeneraly kaomandin'ny zandarimariam-pirenena (Leader Emmo.Nat) fa ho hentitra manomboka izao ny fepetra horaisina amin'ny fivezivezena sy fifampikasohan'ny mponina indrindra amin'ireo toerana mahavory olona sy any amin’ny lalam-pirenena. Hojerena ihany koa ny lalana rehetra mety hivoahan’ny olona mandritra izany toy ireo miondrana amin’ny lakana sy mandeha dia an-tongotra any anaty ala.